WARBIXIN: 20 Sanno ka dib maxaa muhiim ahaa oo laga hirgalin Puntland, Maxaase kalifay? – Puntlandtimes
WARBIXIN: 20 Sanno ka dib maxaa muhiim ahaa oo laga hirgalin Puntland, Maxaase kalifay?
August 3, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxtooyada Puntland ayaa xuseysa caawa sanad guuradii 20 aad ee kasoo wareegtay markii la asaasay maamulkas, waxaana ilaa hadda aan horumar laga gaarin qaar kamid ah qodobada muhiimka ah ee nidaamka dawladnimo taabagal ah, kuwaas oo ay shacabku wali si weyn isha ugu hayaan.
20 sanno ka dib Puntland waxay joogtaa horumar dhanka ammaanka ah iyo horumar kaabayaasha dhaqaalaha, sidas oo kale dibu dhis xoog leh ayaa ka socda magaalooyinka waa weyn ee laamiga ah, taas oo ka dambeysa marka la helay ammaan, waxayna la qabtaa caqabadaha ammaan-daradda mararka qaarkood Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
SIYAASADDDA (DOORASHO QOF IYO COD)?
Isbedelo xagga Kursiga ah ayaa ka dhacay, gaar ahaana Madaxweynayaal ayaa xilalka iskugu wareejiyey si nabad ah, oo ay ku qanceen natiijo doorasho oo ay codeeyeen Xildhibaano ay soo xuleen Odayaasha qabaa’ilka, mase aheyn mid dadweyne oo dhan codka dhiibtay.
Puntland aad ayaa loogu dhaliilayaa in aysan gaarin hadafkii Hal qof iyo Hal cod, waxaana marar badan dhacday in maamuladii iskaga dambeeyey xilalka ee ay kala hogaaminayaan Cabdiraxmaan Maxamed Faroole & Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay labaduba ku guul-dareysteen in ay bulshada u jiheeyaan nidaamka doorasho xor ah.
Hab beelaysiga ama tareysiga ayaa ah caqabad wali ka taagan 20 sanno ka dib mandiqada Puntland, waxaana Hogaamiyaasha marka ay tartamayaan ay qodobada ugu muhiimsan ka dhigtaan meelmarinta doorasho qof iyo cod ah, laakiin marka ay guuleystaan ayaa qorshahaasi noqdaa mid aan hirgali Karin.
CIIDAMO U DHISAN SIFO QABAA’IL?
Puntland ayaa 20 sanno ka dib xagga dhismaha ciidamadu ay tahay meelaha ugu badan ee ay ka liidato, inkastoo ay Shacabku u diyaarsan yihiin ka hortagida ficilo kasta oo ka yimaada daafaha Puntland, haddana ciidamada Difaaca ayaan laheyn habkii ciidamo, waxaana lagu eedeeyaa Xukuumad kasta oo timaada in ay burburiso ciidamada,iyadoo ka leh ujeedooyin kala duwan.
Hubka ayaa ku jira gacmaha beelaha, ciidamaduna waxay u dhisan yihiin sida qabaa’ilkii, Taliyaasha ayaana ah kuwa mar kasta loogu magac-darro ciidamada Puntland, taas oo muujinaysa in hanaanka dibu dhiska ciidamadu yahay mid aan hufneyn oo ay habka beelaysigu ku weyn tahay.
MATALAAD SHACAB LAMA HAYO WALI?
20 sanno ka dib laguma guuleysan qabashada doorashooyinka Golayaasha degmooyinka taas oo ah fursad dadweynuhu ku sameyn karaan matalaad cidda ay dooranayaan, waana mid kamid ah dhaliilaha waa weyn ee aan wali xalka rasmiga ah loo helin, Shacabkuna ay sugayaan in ay mar uun arkaan.
Sidaas oo kale beelaha qaarkood ayaa wali isku arka in aysan haysan matalaad talada iyo go’aanka masiiriga ah, balse ay yihiin oo kaliya Canshuur-bixiyayaal, taasna waa caqabad kale oo taagan, kaliftayna in aysan beeluhu kalsooni ku qabin Shaqada dawladda.
Xukuumaddihii iskaga dambeeyey Puntland, gabi ahaanba wey iska difaacaan eedaha qodobada, balse xaqiiqada taala mandiqada ayaa ah in aan wali la gaarin halkii loo baahnaa, Puntland waxay u diyaar garoobaysaa 08 January 2019 doorasho ay codadka leeyihiin 66 xildhibaan, taas oo shacabka ka dhigtay mid rajadoodu yar tahay.